Talata 26 Novambra 2019. – FJKM
Talata 26 Novambra 2019.
Mahatezitra an’ i Jehovah ireto vahoaka sisa satria:
Efa nandre ny faminaniana ny amin’ny fiavian’ny loza ireto Israely nandeha nitsoaka any Egypta ireto. Efa natrehany ny fandravana an’i Jerosalema sy ny fahababoan’ny namany , saingy tsy mety mino mihitsy izy ireo . Mitovy amin’ny olona tamin’ny andron’i Jesoa izay nahavita nanao rarivato mahafinaritra ny fasan’ny mpaminany , saingy tsy mino ny fanambarany . Aoka mba tsy ho ianao izany !
2-Tsy mahafoy ny fitiavan-tsampy
Tsy nitsahatra nanamafy ny mpaminany nifandimby fa ny fanompoan-tsampy no mahatonga ny fahatezeran’ Andriamanitra nihatra taminy. Kinanjo , na dia tonga any Egypta tany fandosirany aza izy ireo dia mbola manohy izany fanompoan-tsampy izany . Aza adinoina fa ny fanompoa-tsampy no fady indrindra (1 Pet 4.3).
3-Tsy mbola torotoro fo :
Tsy ny fahaizana tsianjery no tena tanjona tamin’ny nanomezana ny lalàna , dfa ny hahatonga ny olona hiaina izany . Mila miteraka fanenenana tanteraka ho an’izay nandika azy Andriamanitra . Tsy hita mihitsy amin’ireto olona ireto izany . Mila manenina amin’ny nataony izy . Tsarovy fa ny fo torotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon’Andriamanitra tsinotsinona (Sal 51.17).